Degdeg:- musharixiinta Jubbaland oo kudhawaaqay guddi doorasho + Xiisada Kismaayo oo sii korodhay. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDegdeg:- musharixiinta Jubbaland oo kudhawaaqay guddi doorasho + Xiisada Kismaayo oo sii korodhay.
Degdeg:- musharixiinta Jubbaland oo kudhawaaqay guddi doorasho + Xiisada Kismaayo oo sii korodhay.
August 8, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 0
Midowga Mysharaxiinta Jubaland ayaa soo saaray Gudiga Doorashada Jubaland
Horey waxaa u jiray Gudi Doorasho oo uu soo magacaabay Madaxweynaha Jubaland kuwaas oo dhaliyey khilaaf xoogan
kismaayo ayaa hada wajahayso dooraahada labo barlaman iyo labo madaxweyne.
Lama oga sida ay wax noqon doonan iyadoo doorashada Madaxweynaha Jubaland ay ka harsan tahay wax kayar 14 cisho oo kaliya.
Xog:- Cabdi Ileey oo isku dayay inuu ka baxsado xabsiga uu ku xidhan yahay iyo Dowladda oo kahadashay.
DEG DEG+DAAWO: Wasiiradda DF Soomaaliya oo xaafiisyadoodii cabsi uga qabay, kuna dhawaaqay